संसदीय समितिमै एमाले सांसदबीच भनाभन, माधवले ओली पक्षीय रानालाई भने : प्रतिगमनका मतियार बाहिर जानू | Nepal Khabar
आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा रानाले एमालेका असन्तुष्ट नेता नेपाललाई आक्रोशित बनाउन शैलीमा बोल्दै गए। उनले अहिलेको संसदलाई जनताले नभइ सर्वोच्चले ल्याइदिएको तर्क गरेका थिए। 'प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुन:स्थापना भएको छ। यो संसदलाई जनताले ल्याएको होइन, सर्वोच्चले फर्काइदिएको हो। अहिलेको सरकार पनि सर्वोच्चले बनाइदिएको हो', उनले भने, 'सरकार र संसद दुवै सर्वोच्चले बनाइदिएको कुरामा कुनै दुई मत छैन, दुवैलाई जनताले ल्याएका होइनन्।'
आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा नेता नेपालतर्फ पनि उनले हेर्ने गरेका थिए। त्यही क्रममा रानाले संसद विघटनको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेताहरुले पनि लिनुपर्ने भन्दै नेता नेपालतिर दोष थोपर्न खोजे। 'दुई दुई पटक संसद विघटन गर्न बाध्य पार्नेहरूले वरिष्ठ नेताहरुले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ', माधव नेपालतिर हेर्दै उनले भने, 'संसद विघटन राजनीतिक निर्णय हो। यो जिम्मेवारी वरिष्ठ नेताहरुले लिनैपर्छ।'
उनले नेपाललाई अझै आक्रोशित बनाउने गरी एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा उनीहरु घरमा गएर सुतेको टिप्पणी गरे। 'संसद चाहियो भनेर कराउने नेताहरु बैठक बस्दा बस्दै कहाँ गएर सुते? आफ्नै पार्टी अध्यक्षले विश्वासको मत लिने बेला किन अनुपस्थित भए? आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा घरमा गएर सुत्ने अनि अहिले यस्ता कुरा गर्ने?'
नारदमुनिले चिढ्याएपछि माधव पक्षीय सांसद दीपकप्रकाश भट्ट जंगिए। उनले आक्रोशित मुद्रामा सांसद रानालाई प्रतिगमनका मतियार भन्दै बाहिर जान चेतावनी दिए। 'यो त अति भयो। प्रतिगमनका मतियारहरु बाहिर जानुस्', उनले भने। भट्टसँगै नेता नेपाल पनि आक्रोशमा आए।
'जनादेश प्राप्त संसद दुई दुई पटक विघटन गर्ने अनि अहिले यहाँ यस्ता कुरा? प्रतिगमनमा मतियारहरु बाहिर जानुस्', सांसद भट्ट र नेता नेपालले नारदमुनितिर लक्षित गर्दै भने। रानामाथि नेपाल र भट्ट मात्रै खनिएनन् कांग्रेस सांसद पनि जाइलागे। कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि रानमाथि आक्रोश पोखे। 'तिमी प्रतिगमनका मतियार संसदमा के बोल्ने थाहा छैन?', उनले भने, 'यो संसद र सरकार जनताले ल्याएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताले बनाएका हुन्।
माहोल बिग्रिँदै गएपछि समिति सभापतिले सांसदहरुलाई थामथुम गर्न खोजेका थिए। रानासँग माधव पक्षीय सांसद सरलाकुमारी यादव पनि भनाभनमा उत्रिइन्। यी दुईजनाबीच तँ तँ र म म सम्म झरेर भनाभन भयो
प्रकाशित: July 25, 2021 | 14:23:24 साउन १०, २०७८, आइतबार